DINGADINGA : Misy lalàna mifehy izay tokony harahina toy ny jono hazandrano rehetra
Tokony manana fahazoan-dalana sy fahazoan-dalana manangom-bolatra « permis de collecte » ireo mpitrandraka dingadingana na “concombre de mer” na koa “holothurie”. 15 janvier 2020
Voafetra ny habe azo alaina ka ireo mihoatra ny 11cm raha mbola lena no farany kely azo alaina ary 8cm kosa raha maina.
Tsy zavamaniry ny « concombre de mer » fa biby miaina anaty ranomasina. Anisan’ny mpampidi-bola amin’ny kitapom-bolam-panjakana izy io satria tena lafo eo amin’ny tsena aziatika. Ireo Aziatika moa no tena mpihinana azy io. 10 ka hatramin’ny 30 cm no halavan’ny « concombre de mer » lehibe amin’ny ankapobeny arakaraka ny karazany, saingy misy mahatratra 3metatra kosa toy ny « cordon mauresque ». Maro karazana izy io ary misy ny miaina amin’ny rano marivo, misy kosa ny miaina amin’ny lalina. Misy ny atao hoe ‘collagène’ ny dingadinga ka araka ny fitsaboana sinoa dia manenjana sy mahamandina ny hoditra ka mahatanora lalandava. Toy ny trozona dia mihinana « planctons » koa izy saingy ny mampiavaka azy dia mihinana ireo fako (saingy tsy ny fako plastika) ao anaty ranomasina ka mahatonga ny anarany hoe mpanadio ny ranomasina.
Manana andraikitra lehibe ny dingadinga amin’ny fitazomana ny ranomasina hadio ahafahan’ireo karazana hafa miaina tsara. Maro koa mantsy ny hazan-dranomasina toy ny ‘langoustes’ tsy afaka mivelona amin’ny rano maloto. Mahatratra 500 USD ny kilao amin’ny karazany sasany any amin’ireo firenena aziatika, ka nampirongatra ny fitrandrahana azy io teto Madagasikara. Mora alaina mantsy satria biby tsy mahay miaro tena izy io, fa fandefasana ‘toxines’ no mba fiarovantenan’ny sasany aminy. Tsy afaka mandositra ihany koa fa mandady miadana.
Mihavitsy aty andrefana
Rehefa lany ny tamin’ny ranomasina marivo dia nanomboka nitrandraka ny tamin’ny lalina koa ireo mpanjono ka nampiasa ‘bouteille d’oxygène’ izy ireo tamin’izany. Tato aoriana moa dia noraran’ny fanjakana ny fakana dingadinga mitondra ‘bouteille’ mba hiarovana azy ireo. Nihavitsy hatrany izy ireo ka nahatonga ireo mpanjono mandeha lavitra hatrany maka azy io ary nisy tratran’ny tafika frantsay tany amin’ny ‘iles éparses’, taona vitsivitsy izay. Nogiazan’ireo Frantsay tamin’izany ireo fitaovam-panjonoana rehetra satria voakilasy ho faritra arovana ara-tontolo iainana any. Ankehitriny dia efa mihavitsy ny dingadinga aty amin’ny fari-dranomasina andrefan’i Madagasikara, ka efa nivadika amin’iny fari-dranomasina atsinana Sainte Marie iny indray ny ankamaroan’ ireo mpitrandraka azy io.
Ho fitsinjovana azy tsy ho lany taranaka dia efa misy ny vina hitaizana ny “holothuries” any amin’ny Faritra Atsimo Andrefana. Efa misy toeram-piompiana izay novatsian’ny Vondrona eoropeana vola ny fikarohana sy andrana amin’ny fampitomboana taranaka sy fiompiana dingadinga. Voalaza tamin’izany anefa fa mbola olana lehibe ny halatra, ka nahatonga ireo mpiompy tsy dia navitrika loatra. Efa misy ny fomba fanao vaovao sy dina hiarovana amin’izay halatra izay any amin’iny faritra iny saingy mbola mijanona ho andrana aloha hatreto. Na izany na tsy izany anefa dia tsena lehibe ho an’i Madagasikara ny fiompiana dingadinga raha voaaron’ny fanjakana ny fandriampahalemana sy ny halatra. Ahafahana mahazo vola vahiny maro no sady afaka mampiakatra ny fari-piainan’ny mpiompy sy mpanjono ihany koa. Ny olana moa dia misy hatrany ireo tsy te-hisasatra fa mitavana ny hatsembohan’ny hafa fotsiny dia ireo mpangalatra. Mampiditra fatiantoka mangitsoka maro ho an’ireo mpiompy nefa zara raha voasazy rehefa tratra.